China 2X2 Light Fitting, 2X2 Na-enwu enwu, 2X2 Troffer Led Retrofit Kit Manufacturer
Nkọwa:2X2 Light Fitting,2X2 Na-agba Mgba,2X2 Na-agbagha Ngwá Ọrụ Ngwá Agha,2X2 Egwuregwu Ngwá Ọrụ Ngwá Agha,,
Home > Ngwaahịa > Enwusi Ìhè > 2x2 Na-enwusi Ìhè
Ngwaahịa nke 2x2 Na-enwusi Ìhè , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, 2X2 Light Fitting , 2X2 Na-agba Mgba suppliers / factory, wholesale high-quality products of 2X2 Na-agbagha Ngwá Ọrụ Ngwá Agha R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
2x2 40W Ejiri ihe nkwụnye ihe nkwụnye ihe ntanye  Kpọtụrụ ugbu a
2x2 25W Ebube Mgbagwoju Anya Fixtures 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụahịa otu: USD 23.5 - 25 / Piece/Pieces
EKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ NDỊ ỌTỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ: Egwuregwu Ndị Na-agbanye Ọkụ bụ ọkụ ndị na-ewu ewu n'ihi na ha dị nnọọ mma. Ha na-adịgide adịgide ma dị ukwuu maka ịmebe obere obere ebe. NTỤKWU NDỊ NA-ECHICHE: 2x2 Ejiri Ihe Ntuchi...
Ọnụahịa otu: USD 22 - 23 / Piece/Pieces
Gbanye ego ndị a 2x2 Na-agba Mgbu 5000K ma chekwaa ike na ike niile n'otu oge. Nke a na-eme ka ìhè ọkụ 2x2 dị ọkụ 25W na-enye 3,250 lumens na 5000K na-egbuke egbuke ọkụ na-acha ọkụ maka ìhè ọkụ n'ebe niile. Ihe ndị a dị elu, a na-emepụta Led...
China 2x2 Na-enwusi Ìhè Ngwa
Inweta ikike ọkụ na mpaghara azụmahịa nwere ike ịghọ aghụghọ. Otú ọ dị, site na nhọpụta nhọrọ nke 2x2 na- agbagha Ligh ts , ọ dị mfe. anyị 2X2 Light Fit n'ihi na ọkụ ọkụ azụ dị ukwuu maka ngwa ahịa . Na 2X2 Troffer Led Retrofit Kit , ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ntọala ma kwadebe oghere gị na ìhè dị ọcha nke dị ike . Anyị 2X2 Egwuregwu Ngwá Ọrụ Ngwá Agha na-enye CRI dị elu (Index Color Rendering) na obere ike oriri.
2X2 Light Fitting 2X2 Na-agba Mgba 2X2 Na-agbagha Ngwá Ọrụ Ngwá Agha 2X2 Egwuregwu Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Post Top Light Fittings